Mashandisiro ekushandisa App IO kubhadhara, kudzorera uye kutaurirana 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kana isu tichiteerera kune hunyanzvi hwekugadzira hwakatangwa nenyika yeItaly isu zvirokwazvo takanzwa nezve iyo nyowani IO app, Yakagadzirwa naPagoPA uye inosununguka kuiswa pane chero smartphone uye inoshandisirwa nevagari vese veItari. Vazhinji vashandisi vakabva vangozviwana vari mudambudziko vachishandisa iyo IO app sezvo ivo vachingotora iyo app pane inotakurika chishandiso vasingazive mashandisiro ayo, ndeyei, kana kunyangwe nzira yekupinda mukati, iyo ingaite senge ipapo ipapo. zvisingaite kana tisati tambonzwa nezveSIDID uye kuzivikanwa kwedhijitari (zvinosuwisa zvakakosha kuti tikwanise kushandisa iyo IO app).
Muchirongwa ichi tinokuratidza mashandisiro ekushandisa iyo IO kunyorera kubhadhara, kudzorera uye kutaurirana kwehurumende, kukwanisa kubhadhara nekukurumidza muzvitoro uye zvakare kubatsirikana kubva kuzvirongwa zvine chekuita nekudzora kushandisa mari uye mibairo yakachengeterwa avo vanoshandisa imwe mari.
Mashandisiro ekushandisa iyo IO app
Iko IO kunyorera kuri nyore kushandisa, asi kukwanisa kuishandisa nekugona kwayo kuzere Chekutanga pane zvese isu tichafanirwa kutora iyo SPID, Wobva waenderera mberi nekurodha pasi uye shandisa iyo application. Muzvitsauko zvinotevera tichakuratidzawo nzira yekuwedzera kiredhiti kadhi kana kadhi rakabhadharwa kare uye maitiro ekugamuchira notices nezve kutaurirana nehutongi hweveruzhinji.
Shandisa SPID uye teerera iyo IO app
Usati washandisa iyo IO application isu tichafanirwa kunge tichigadzira iyo SPID, inova iyo dhijitari chitupa chakazivikanwa zvakananga neItari State. Iri rakakosha kadhi rekuzivikanwa rinogona kuwanikwa kubva kune vazhinji vanopa, avo vanoripa mahara (saka hatizombofaniridzi kubhadhara chero chinhu zvacho). Parizvino vanopa zvakanakisa kuita kuti SPID ikurumidze Ndiri:
PosteID SPID inogoneswa
SPID ine Namirial ID
Chero chero mupi waunosarudza, ingo zadza iyo inodiwa data, sarudza nzira yekusimbisa iyo inokodzera isu zvakanyanya (semuenzaniso, yePoste Italiane zvakare zvakanaka kuenda kuposvo hofisi) uye nekudaro uwane magwaro eSIDID, kuti ashandiswe gare gare muIO application. Kana isu tichida kuziva maitiro ekumisikidza iyo SPID nhanho nhanho, tinokukoka iwe kuti uverenge magwara edu Maitiro ekukumbira uye kuwana iyo SPID mi Maitiro ekumisikidza SPID: yakazara gwara.
Mushure mekuwana iyo SPID tinogona kurodha yemahara IO Anwendung yeApple uye iPhone zvakananga kubva kuGoogle Play Store uye Apple App Store.
Wedzera kiredhiti, prepaid kana debit kadhi
Kamwe iko iko iko application kukawedzerwa kune yedu mbozhanhare, vhura iyo, tinya bhatani Pinda ne SPID uye isu tinosarudza iyo SPID mupi watinogadzira iyo dijitari kuzivikanwa.
Isu tinopinda kodhi yekusimbisa, simbisa iyo data yakawanikwa kubva kuSpID, uye wobvuma mamiriro ekushandisa kwechishandiso. Pachiratidziro chinotevera tinosarudza PIN ine manhamba matanhatu, tinosarudza kuti tiise chokwadi chebhiometric uye tinosimbisa kero yeemail (yatowanikwa kubva kuSpID).
Paunongopinda wega skrini yekushandisa tinogona kuwedzera kiredhiti kadhi, kadhi rakabhadharwa (senge Postepay) kana kadhi yeATM nekudzvanya pazasi pemenu. Wallet, uchimanikidza kurudyi kwepamusoro kwechinhu wedzerakusarudza chinyorwa Nzira yekubhadhara uye kusarudza pakati Kiredhiti, debit kana prepaid kadhi, BancoPosta kana Postepay kadhi mi Kadhi YekubhadharaBAMCOMAT. Isu tinoita sarudzo inoenderana nerudzi rwekadhi ratinaro, tobva taisa nhamba yekadhi, zuva rekupera uye kodhi yekuchengetedza kadhi (CVV2, kazhinji kumashure). Pakupera tinodzvanya Ramba wakadaro kusimbisa kuwedzerwa kwekadhi kuchikumbiro cheIO.
Mushure mekuwedzera nzira yekubhadhara inoshanda kune iyo IO application, tinopinda menyu Nezvedu pazasi kuti uwane zvimwe zvinobatsira zveapp. bhadhara mutero wemotokari, sarudza pekushandisa iyo vhoti yehoridhe, gamuchira yambiro nezve zuva rakatarwa reIMU uye TASI mutero, gamuchira chiziviso nezve kupera kweiyo NYIKA (mutero wemarara), kubhadhara mari yechikoro uye shandisa kudzorera.
Kana mataundi edu aripo pakati peavo vataurwa (tinokwanisawo kuwedzera manisiparasi uye tione kana ichibatanidzwa nemasevhisi ePagoPA) isu tinokwanisa kubhadhara ingangoita mitero yese online, tichishandisa imwe yenzira dzekubhadhara dzinotsigirwa. Tiri kufarira kudzoreredzwa kwenyika? Mune ino kesi isu tinokukoka iwe kuti uverenge gwara redu Maitiro ekumisikidza State Cashback: makadhi, mamiriro uye miganho.
Maitiro ekugamuchira kutaurirana kubva kune veruzhinji manejimendi
Pamusoro pekadhi, isu tinoda here kushandisa iyo IO kunyorera kuti tigamuchire kutaurirana kubva kune veruzhinji manejimendi? Muchiitiko ichi, zvakaringana kuita kuti iyo app iiswe pafoni, nekuti nechero kutaurirana nyowani chiziviso chinotumirwa pachiratidziri (kana zviyeuchidzo zvikasaoneka, tarisa masetingi ekuchengetedza magetsi, kunyanya paApple). Kuti usarasikirwa nechiziviso, tinogona zvakare kutumira mameseji kubva kuIO app kukero yedu yeemail: kuti uite izvi, ingovhura iyo IO app pane yako smartphone, pinda nePIN kana biometric kuwana, pfuurira pasi menyu Nhoroondo, sarudza menyu Kutumira mameseji neemail uye pakupedzisira pfuurira pachinhu Bvumira yese masevhisi. Kana isu tichida kusarudza nemaoko masevhisi ekuti tigamuchire mameseji mubhokisi reemail, tinosarudza chinhu Sarudza sevhisi nebasa uye unoratidza mhando yemeseji yatinoda kugamuchira.
Kana isu tikaramba tichingova nezvinetso neIO zviziviso zveapp, tinokurudzira kuti iwe uverenge vatungamiriri vedu Kana zviziviso zvikanonoka, dzima bhatiri rekushandisa mi Natsiridza Android Notices pamusoro zvechizarira chidzitiro.
Iyo IO application ingangove yakanakisa padanho reIT rakagadzirwa neItari State: muchokwadi, iko kunyorera kuri nyore kushandisa, inosangana mushe nemasevhisi ese eSIDID, inokutendera kuti ugamuchire iyo yekudzoserwa yakapihwa nehurumende, shandisa mutero wekuzivisa masevhisi uye mitero uye dzimwe nzira dzekutaurirana kwemasangano, pasina hazvo kufanira kutaura kero yePEC (iyo, zvisinei, inokurudzirwa kupindura meseji dzakagamuchirwa).
Kana isu tichida kugadzira email yakasimbiswa yekupindura kune emaemail emaemail, tinokurudzira kuti iwe uverenge chinyorwa chedu. Maitiro ekuwana iyo PEC email kero (yakasimbiswa tsamba).
Kana, pane kudaro, isu tiri kutsvaga yakanaka prepaid kadhi kuti tibatanidze pamwe neIO application, tinogona kuverenga mazano edu. Iwo akanakisa emahara chaiwo makadhi echikwereti mi Makadhi akabhadharwa ekutanga ekutenga online pasina njodzi.